BUDDHIST TERMS' Dictionary: NOBLE EIGHTFOLD PATH - အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ္ဂ
NOBLE EIGHTFOLD PATH - အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ္ဂ
NOBLE EIGHTFOLD PATH Aṭṭhaṅgikamagga
အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ္ဂ - မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၊ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်။
၁) မှန်စွာ သိမှု,
၂) မှန်စွာ ကြံစည်မှု,
၃) မှန်စွာ ပြောဆိုမှု,
၄) မှန်စွာ ပြုလုပ်မှု,
၅) မှန်စွာ အသက်မွေးမှု,
၆) မှန်စွာ အားထုတ်မှု,
၇) မှန်စွာ အောက်မေ့အမှတ်ရမှု,
၈) မှန်စွာ တည်ကြည်မှု - တို့ဖြစ်သည်။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟူသော အရိယာလမ်းစဉ်သည် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို ချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်သော ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည်။
The Ariya Path of Eight Constituents; the middle way
The eight constituents of the Ariya Path are:
1. Right Understanding,
2. Right Thinking,
3. Right Speech,
4. Right Action,
5. Right Livelihood,
6. Right Effort,
7. Right Mindfulness, and
The Ariya Path is the practice that leads to the end of suffering, dukkha.
See also the MIDDLE WAY.